ကားပေါ်မှပြေးလိုသောအခါကားသော့သည်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ ထို့ကြောင့်ကားသော့သည်ကားအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မိသားစုထဲတွင်ကားရှိသောသူငယ်ချင်းတွင်ကားသော့ရှိလျှင်၊ သင်ကလျှပ်စစ်ကား၊ ကားလား၊ စက်ဘီးလားပင်ဖြစ်ပါစေသော့အမြောက်အမြားရှိသည်။
Locsmith tools-9in1 HUK အလိုအလျောက်သော့ခတ်ခြင်း
တစ်ခု 9in1 သော့ဖွင့်ခြင်းနိယာမအလိုအလျောက် lockpick; (ပျော့ပျောင်း။ ခက်ခဲသည်) သီအိုရီအရ၊ သော့ခတ်အပိုင်းအစတစ်ခုစီကိုနှိပ်ရန်လိုအပ်သည် (တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းမပြုလျှင်ဖွင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရာ၏တိကျမှုကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း) သင်ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူး၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူရုပ်ရှင်ကိုညွှန်ပြသည့်အခါ။ ...
အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ယူအက်စ်သည် lishi lockpick နှင့် decoder ကိရိယာများကိုလာလိမ့်မည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်းတို့တွင်ရှိသည် AM5 / BE2 / KW1 / KW5 / M1 / ​​SC1 / SC4 ။ မူရင်းလီရှီ
ဤနည်းကိုကျင့်သုံးပါကုန်သွယ်ရေးအလုပ်များသည်အမြဲတမ်းဝယ်လိုအားရှိနေသည်။ ဆရာဝန်များ၊ ရှေ့နေများနှင့်ရှေ့နေများများပြားလာသောကြောင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသူများ၊ ရေပိုက်သမားများနှင့်သော့ချက်သမားများနည်းလာသည်။ တကယ်တော့သော့ခလောက်လုပ်ငန်းဟာလူတွေသိတဲ့အတိုင်းပိုပြီး ၀ င်ရောက်နိုင်တဲ့အကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ thi စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို ...
1. အဆစ်ချောမွေ့ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အပိုပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းကာလအတွင်းတုန်ခါမှုနှင့်တိုက်မိခြင်းကြောင့်ဆူညံခြင်းသို့မဟုတ်အက်ကွဲခြင်းများတွင်တုန်ခါခြင်း၊ တိုက်မိခြင်း၊ ဝယ်ယူသောအခါစစ်ဆေးရန်အာရုံစိုက်ပါ။ 2. ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
နေ့စဉ်သုံးသည့်အခါကားသော့များသည်သော့ကိုဆုံးရှုံးလေ့ရှိပြီးသော့ခတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်မျက်ရည်ယိုခြင်းများကြောင့်ဖွင့ ်၍ မရပါသို့မဟုတ်သော့ခတ်ဖွင့်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုပထမဆုံးလုပ်ရမှာက၎င်းကိုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအပိုင်းရှိအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကားသော့၏အထူးကိရိယာများကိုနားလည်ခြင်းအားဖြင့် ...
ဒီနေ့ခေတ်မှာကားများများများမိသားစုထဲဝင်လာတယ်။ ထို့အပြင်အချိန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူကားများပိုမိုသော့ခတ်နိုင်သည့်ဝင်ပေါက်တစ်ခုနှင့်ခလုတ်တစ်ခုစတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာယာဉ်၏မူလစက်မှုသော့ကိုဝှက်ထားခြင်းခံရပြီးပိုင်ရှင်သည်အဝေးထိန်းခလုတ်အားအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
၂၀၁၅ နှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကုမ္ပဏီကြီးများစွာနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ နှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကုမ္ပဏီကြီးများစွာနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဖြစ်သည်။ ဘရာဇီးကဲ့သို့သောအဝေးထိန်းခလုတ်၊ ပလတ်စတစ်အဖုံးများနှင့်အချို့သော OBD ကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းတင်ပို့သည်။ USA.We တွင်သော့ခတ်သောကိရိယာများ၊ ကားအထိမ်းအမှတ် .key chains များကိုအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးသည်။ တောင်အာဖရိကတွင် .we သည်အမြဲတမ်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက္ကားစျေးနှုန်းမှအကျိုးခံစားရန်စီးပွားရေး ၀ ယ်သူသည်မှတ်ပုံတင်သင့်သည်။ ငွေပေးချေမှုနှင့် ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် GBP၊ EUR နှင့် USD တို့ဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပါသည်။ ဗီဇာ၊ Matercard နှင့် Western Union, T / T ဘဏ်လွှဲပြောင်းမှုကိုလက်ခံပါသည်။
Locksmithobd ကုမ္ပဏီသည်ရှန်ကျန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးလိပ်စာမှာရှန်ကျန်း Longhua ခရိုင်၊ longhua လမ်း၊ Tianhui အဆောက်အ ဦး၊ C-512 ။ ၂၀၁၅ နှစ်မှ စတင်၍ ဖွင့်လှစ်သည်။ Manufactory သည်ကားသော့များနှင့်အချို့သောသော့ချက်လုပ်သောကိရိယာများရှိသည်။ KD အမှတ်တံဆိပ်စက်တွင်လည်းစက်ရှိသည်။